Abashadile eminyakeni emi-2 balahlekelwa amakhilogremu angu-180 ababili - Psychology 2022
Abashadile eminyakeni emi-2 balahlekelwa amakhilogremu angu-180 ababili
Eminyakeni emibili edlule, abashadile u-Lexi noDanny bazibekela umgomo omkhulu!
Ngo-2015, uDanny noLexi benza isithembiso sikaNcibijane - ukunciphisa umzimba nokulungisa imizimba yabo. Ngaleso sikhathi, indoda nomfazi ababili babenesisindo esingamakhilogremu angu-346 futhi bazizwa bebuhlungu kakhulu.
ULexi unesisindo esingaphezu komyeni wakhe - amakhilogremu angama-219. Lapho ehlala etafuleni, isisu sakhe sasiphezu kwetafula. Vumelana, lena ingxabano enamandla ukuze unakekele umzimba wakho.
Ukuze ulahlekelwe amakhilogremu angu-180 eminyakeni emi-2 kwabashadile abahlala ndawonye iminyaka engu-10, ugqozi lwensimbi lwasiza: uthando nesifiso sokuba nomntwana.
Ungalindi ukuthi uNyaka Omusha uguqule impilo yakho, thatha isinyathelo namuhla.
Abashadile bathi abanayo imfihlo ekhethekile yokulahlekelwa isisindo - bavele badla kahle futhi bachitha isikhathi esiningi ejimini. Namuhla, intombazane ihola i-Instagram @fatgirlfedup, lapho yabelana khona ngezithombe namathiphu akhuthazayo.
Kusasa kuzoba usuku lokuqala lwempilo yakho edlule. Ngabe uzolokhu uthi uzoncipha, noma uzothatha isinyathelo? Azisekho izaba. Akukho ukwesaba. Nguwe ophethe ikusasa lakho, ngakho-ke hamba uye ejimini ubonise noma ubani okugqolozele ukuthi wenziwe ngani.
Ukumiswa okubuthakathaka: Amathiphu angu-3 avela kusazi sezocansi, ukuthi ungasiza kanjani esimweni esibucayi